Yehowa bobefuw ho dwom (1-7)
Yehowa bobefuw no nnue (8-24)
Onyankopɔn bo fuw ne man (25-30)
5 Ma mento dwom mma me dɔfo,Me dɔfo ne ne bobefuw*+ ho dwom. Ná me dɔfo wɔ bobefuw wɔ koko so, asaase pa bi so. 2 Ofuntum asaase no yiyii so abo, Oduaa bobe pa wɔ so,*Osii abantenten wɔ afuw no mfinimfini,Na otuu amoa a wokyĩ nsã* wom wɔ hɔ.+ Afei ɔtwɛnee sɛ ɛbɛsow bobe pa,Nanso bobe a enye nko ara na ɛsowee.+ 3 “Afei, mo a motete Yerusalem ne Yuda mmarima,Mesrɛ mo, mummu me ne me bobefuw ntam atɛn.+ 4 Dɛn bio na ɛsɛ sɛ meyɛ ma me bobefuw noA menyɛe?+ Dɛn nti na m’ani da so sɛ ɛbɛsow bobe paNa asow bobe fõ nko ara yi? 5 Afei momma menkyerɛ moNea mɛyɛ me bobefuw no: Metutu ɛho ban,Na wɔahyew no.+ Mebubu n’afasu a wɔde abo ayɛ no,Na wɔatiatia so. 6 Mɛma asɛe;+Wɔrentwitwa ho, na wɔremfa asɔw nnɔw ase. Nsɔe ne nwura begye afa,+Na mɛhyɛ omununkum sɛ ɔnntɔ osu nngu so.+ 7 Asafo Yehowa bobefuw no ne Israel fi,+Na afuw a n’ani ku ho no ne Yuda mmarima. Ɔkɔɔ so hwɛɛ atɛntrenee kwan,+Nanso hwɛ! ntɛnkyea na wobui;Ɔhwehwɛɛ adetrenee,Nanso hwɛ! osu ne nteɛteɛm na ɔtee.”+ 8 Wonnue, wɔn a wɔka afi bɔ afi so,+Na wohwim asaase ka asaase ho+Kosi sɛ ɔkwan biara nna hɔ bio,Na mo nko ara motena asaase no so! 9 Asafo Yehowa aka ntam agu m’asom sɛ,Afi akɛse pii a ɛyɛ fɛBɛyɛ tantaantan,Na obiara rentena mu.+ 10 Bobefuw eka du* bɛma mo bobesa bat susuhina* baako pɛ,Na mudua aduaba homar susude* baako a, mubenya efa* baako pɛ.+ 11 Wonnue, wɔn a wɔsɔre anɔpatutuutu kɔnom nsã a ano yɛ den,+Wɔn a wɔtena nsã* ho ma ade sa tumm kosi sɛ wɔbɛbow sram! 12 Wɔwɔ sanku ne sankuten,Mpintin, atɛntɛbɛn, ne nsã* wɔ wɔn apontow ase;Nanso Yehowa nneyɛe de, wonnwen ho,Na ne nsa ano adwuma nso, wonhu. 13 Enti wobetu me man afi wɔn asaase so akɔ,Nimdeɛ a wonni nti;+Ɔkɔm bɛde wɔn anuonyamfo,+Na osukɔm ade wɔn nkurɔfo nyinaa. 14 Enti Ɔdamoa* abae ne yam*Na wabue n’anom kakraa.+Na kurow no mu anuonyamfo,* emu nnipadɔm a wɔyɛ dede, ne emufo a wogye wɔn ani tra soBesian akɔ hɔ. 15 Na wɔbɛbrɛ ɔdasani ase,Onipa bɛba fam,Na wɔbɛbrɛ ahantanfo ani ase. 16 Asafo Yehowa atemmu* bɛma wayɛ kɛse;Nokware Nyankopɔn no, Ɔkronkronni+ no, nam trenee+ so bɛtew ne ho. 17 Na nguan mma bedidi te sɛ nea wɔwɔ wɔn adidibea;Mmeae a mmoa a wɔadɔ srade agyae hɔ adidi no, ɛhɔ na ahɔho bedidi.* 18 Wonnue, wɔn a wɔde nnaadaa nhama twe wɔn afodiNa wɔde teaseɛnam nhama twe wɔn bɔne; 19 Wɔn a wɔka sɛ: “Ɔmma Ne ho nyɛ hare,Ɛmmra ntɛm mma yɛnhwɛ. Israel Kronkronni no atirimpɔw* mmra muMma yenhu!”+ 20 Wonnue, wɔn a wɔka sɛ papa yɛ bɔne na bɔne yɛ papa,+Wɔn a wɔde sum yɛ hann na wɔde hann yɛ sum,Wɔn a wɔde nwenenwene yɛ fremfrem na wɔde fremfrem yɛ nwenenwene! 21 Wonnue, wɔn a wɔyɛ anyansafo wɔ wɔn ankasa ani so,Na wobu wɔn ho mmadwemma!+ 22 Wonnue, wɔn a wɔagye din wɔ asanom* muNe wɔn a wɔyɛ akatakyi wɔ nsãfra* mu,+ 23 Wɔn a wogye adanmude* bu ɔbɔnefo bem+Na wɔde atɛntrenee kame ɔtreneeni!+ 24 Enti sɛnea ogya tɛkrɛma hyew sareNa ogyaframa mene sare a awo no,Saa ara na wɔn ntini bɛporɔw,Na wɔn nhwiren ahuw akɔ sɛ mfuturu,Efisɛ wɔapo asafo Yehowa mmara,*Na wɔmfa Israel Kronkronni no asɛm nyɛ hwee.+ 25 Ɛno nti na Yehowa bo afuw ne man denneennen no.Na ɔbɛteɛ ne nsa wɔ wɔn so akunkum wɔn.+ Mmepɔw bɛwosow,Na wɔn afunu besum mmɔnten so sɛ sumina.*+ Nea akɔ so nyinaa nti, ɔntwee n’abufuw nsanee,Mmom, wateɛ ne nsa, na ɔda so ara rekunkum. 26 Wama ahyɛnsode* bi so akyerɛ ɔman bi wɔ akyirikyiri;+Wabɔ hwirema afrɛ wɔn afi asaase ano noho;+Na hwɛ! wɔde mmirika reba ntɛm.+ 27 Wɔn mu biara mmrɛe anaa onhintiwee. Obiara nni hɔ a ɔretɔ nko* anaa wada. Abɔso a ɛbɔ wɔn asen nhodwowee,Na wɔn mpaboa mu hama ntewee. 28 Wɔn agyan nyinaa ano yɛ nnam,Na wɔn agyan nyinaa mu akuntunkuntun.* Wɔn apɔnkɔ nan te sɛ abo a ano yɛ nnam,*Na wɔn nteaseɛnam nan te sɛ ahum.+ 29 Wɔn mmobom te sɛ gyata,Na wɔbobom te sɛ agyata* a wɔn ho yɛ den.+ Wopow kyere aboa,Na wɔde no kɔ a ogyefo biara nni hɔ. 30 Saa da no, wɔbɛworo agu no soTe sɛ ɛpo a ɛreworo.+ Obiara a ɔbɛhwɛ asaase no behu esum kabii;Omununkum nti, hann mpo adan sum.+
^ Anaa “bobe pa kɔkɔɔ.”
^ Anaa “ahama du.”
^ Anaa “ama ne kra yam abae.”
^ Anaa “kurow no anuonyam.”
^ Anaa “Mmoa a wɔadɔ srade amamfo so na ahɔho bedidi.”
^ Anaa “gyinaesi; agyinatu.”
^ Anaa “bobesa nom.”
^ Anaa “nsã a ano yɛ den a wɔde frafra.”
^ Anaa “n’ani pam so.”
^ Anaa “ayɛ krado sɛ wɔde bɛtow agyan.”